Banyere Anyị - TaiZhou Huaren Ọdụdọ Ngwá Ọrụ Co., LTD
TaiZhou Huaren Ọdụdọ ngwa oru Co., LTD.na e guzobere September nke 2000, n'ichepụta nke a pụrụ ịdabere na inogide eletriki Fans, elu-edu obere ofufe, clip table ofufe, n'uko ofufe, DC Fans na na on.The ụlọ ọrụ nwere abụọ ịba uru nlereanya nchọpụta Kemịkalụ. , patent imewe na 5Ti nwere ihe karịrị ụdị 30 maka nhọrọ gị.
Anyị ọkachamara na ọkụ eletrik Fans. Site na nkwado nke elu rụpụta akụrụngwa na ọkaibe ule usoro, .Thelọ ọrụ ahụ gafere OA, ROHS, CB, 3c asambodo, Nzube anyị bụ iji mepụta na nlezianya management, na-adị ndụ na elu mma na ewute na-eme ihe n'eziokwu ọrụ.
Zhejiang Huaren Technology Co., Ltd. bụ onye a maara nke ọma eletriki eletriki plastik nke nwere ike nke R&D na rụpụta.Huaren moto bụ ọkachamara na elektrọnik elektrọnik na Motors, Motors synchronous Motors and Motors;
Hergbaso na enterprise omenala "iguzosi ike n'ezi ihe, Practicability, Harmony, Innovation" .The ngwaahịa na-ọtụtụ-eji na ụlọ ọrụ nke akpakanamde, Industrial Industry, Health & Fitness, wdg., Karịsịa n'ụlọ ngwa.Headquarter bụ na Taizhou, China,? ụlọ ọrụ na-emejuputa njikwa otu ma bụrụkwa ozi njikwa njikwa, imepụta ọgụgụ isi na nyocha na mmepe mmepe, ịhazi ogo yana ijikọ ụwa ọnụ site na mmepe na-aga n'ihu.Leili aghọwo onye na-eweta sistemu eletriki plastik eletrik na asọmpi zuru oke.
Mgbe ihe karịrị afọ 20 nke mmepe na ịnọgide na-enwe ezi uto akụ na ụba, nke Group si ahịa karịrị iri ise na yuan na 2017, na ngụkọta akụ nke otu narị nde yuan.? Na imekọ ihe ọnụ na ọtụtụ pụtara ìhè ahịa? Na globle, Huaren aghọwo a tụkwasịrị obi atụmatụ onye ibe.
Companylọ ọrụ ahụ na-aga n'ihu na-eji ohere nke teknụzụ nyocha na mmepe na akụkụ ndị na-arụpụta ihe iji nye ndị ahịa ọtụtụ ngwaahịa dị elu, ndị na-akwụ ụgwọ eletriki na-acha ọkụ ọkụ na ihe ndị metụtara ya.? N'ọdịnihu, Huaren ga-enye ndị ahịa ọgaranya na ahaziri iche. ngwaahịa site na-aga n'ihu ọhụrụ ego na akụ mwekota iji nweta ibe uru na-emeri-mmeri.